अनेसासमा सात सल्लाहकार मनोनयन
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:१९ September 11, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास केन्द्रीय कार्यसमितिको सल्लाहकारमा सातजना मनोनित भएका छन् । मनोनित हुनेहरुमा निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली, एलबी क्षेत्री- (नेपाल), एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त र त्रिविवि प्रतिनिधि डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम, डा. पुष्पा शर्मा (भारत) राम खत्री (अमेरिका) र सुमलकुमार गुरुङ (युरोप) रहेका छन् । अनेसासका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाको अध्यक्षतामा आईतबार […]
आफ्नो मृत्युपछि मात्र सार्वजनिक गर्नु भनेर राष्ट्रकवि घिमिरेले ६१ वर्षदेखि लुकाएको गीत यस्तो छ
३ भाद्र २०७७, बुधबार ०८:३९ August 19, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । एक सय एक वर्षको उमेरमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको मंगलबार साँझ निधन भएको छ। आज (बुधबार) बिहान १० बजे पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानसहित उनको अन्त्यष्टि गरिने कार्यक्रम तय गरिएकाे छ। घिमिरेले नेपाली भाषा र साहित्यमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन्। उनले स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैलीमा गीत, कविता र काव्यहरु सिर्जना गरेका छन्। तर, उनले […]
रहेनन् राष्ट्रकवि घिमिरे : आफ्नै देशमा मर्ने इच्छा पूरा
२ भाद्र २०७७, मंगलवार १८:५१ August 18, 2020 Nonstop Khabar
भक्तपुर, २ भाद्र । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ । १ सय १ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ उनकाे निधन भएकाे हाे । ५ बजेर ५५ मिनेटमा निवासमै उनकाे निधन भएको पारिवारिक श्रोेतले जनाएको छ । उनी स्वासपश्वाससम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित थिए । विं सं १९७६ असोज ७ गते लमजुङको पुस्तन गाउँमा उनको जन्म भएको थियो […]
३१ श्रावण २०७७, शनिबार ०८:५९ August 15, 2020 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, २७ साउन । नारायण प्रसाद अधिकारीको ८९औं जन्मोत्सवको अवसरमा अधिकारी परिवारका सर्वसम्मानित व्यक्ति ‘बा’ को जीवनमा आधारित सन्तती र शुभचिन्तकहरुको भावनाहरु संग्रहित ‘हाम्रो बा’ पुस्तक विमोचन भएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अधिकारी परिवारले उक्त पुस्तक विमोचन गरेका हुन् । ठूला पदमा पुगेका व्यक्तिहरुको चाकडीमा लेखिने भजनभन्दा आफ्नो ‘बा’ का […]
५ श्रावण २०७७, सोमबार २२:१० August 4, 2020 Nonstop Khabar
टोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सन् २०२० देखि २०२२ सम्मको दुई वर्षे कार्यकालका लागि प्रकाश पौडेल ’माइला’ (जापान) को नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ । यस अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका माइला अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । अनेसासको निर्वाचन कमिटीले सोमबार साँझ अनलाईनमार्फत नतिजा घोषणा गरेको हो । शुक्रबार, शनिवार र […]
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७ औँ जन्मजयन्ती सोमबार देश तथा विदेशमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवादसहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुन लगाएका छन् । उनले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीको घरघरमा सस्वर लय हालेर पाठ गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिकरूपमा […]
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार राष्ट्रियसभा गृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । २ सय ५९ बुँदा रहेको नीति तथा कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारीप्रबद्र्धन, आवागमन ब्यबस्थापनलगायतमा […]
२४ बैशाख २०७७, बुधबार १८:५३ May 6, 2020 Buddha Sharan
काठमाडौँ , २४ बैशाख । काष्ठमण्डपसँगै रहेको बिशाल आयातआकारको सत्तलको वास्तविक पुरानो नाम (सिँल्यंसत:) काठ बचेर बनाइएको सत्ताल भन्ने बुझिन्छ । मन्दिर जस्तै देखिने यो सत्तालको चार कुनामा चारवटा पंञ्छि गरुड (शार्दूल) राणाकाल नेपाल संवत १०४० मा तहविल निवासी धर्मनारायण मानन्धरले धातु मूर्ति प्रतिस्थापन गराएपछि सिंह सत्तल भनिन थालिएको हो । भजन गायनका लागि […]